Landa iPhakheji ye-UKMIL Blackburn Buccaneer S2 Package FSX & P3D - Rikoooo
Iphakheji ye-UKMIL Blackburn Buccaneer S2 FSX & P3D Inguqulo 2.1
Usayizi 185 MB
Play 36 353
Umbhali: I-UKMIL, FSX/P3D buyekezwa nguPhilippe Wallaert, Umsindo nguSerge Luzin
I-Mise à safari le 14 / 12 / 2017: I-Nouvelle version 2.1, iyahambelana Prepar3D v4, GPWS, paneli 2d au format 16-9, nouveaux effets, nouveaux amadodana, 6 nouveaux repaints, modèle de vol mise à safari, and imininingwane dans le fichier Readme.
pack Complete kuhlanganise inqwaba animations, a abanikeze asebenza nabo enhle virtual kanye repaints kweshumi. Ideal ukuze wenze i-dock / akhumule kusuka umkhumbi othwala izindiza. Le ncwadi esakhiweni UKMIL.
Lokhu add-on likhululekile, kodwa sekutholakale ukuze asekele USIZO Heroes (H4H) a charity British mhla 1 Okthoba 2007 ukusiza servicemen British nabesifazane balimala kusukela ngoSepthemba 11, 2001
I Blackburn Buccaneer kwaba indiza fighter yakhelwe ngu UK kule 1950s sekwephuzile. Ekuqaleni on yezinkampani endizeni, yena wahlala enkonzweni iminyaka engamashumi amathathu futhi lakhiwa mayelana 200 amakhophi. It wazibonakalisa eziqinile, ezithembekile, futhi kahle kwalo mission of kuhlaselwa kwaleli chibi.